ရင်သားကင်ဆာ: အပင်အနာပျောက်စေနိုင်သောအလားအလာကော့တေး6- Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » ကနျြးမာရေးသတင်းများ • ကျွန်မရဲ့ကျန်းမာရေး • စောင့်ရှောက်မှု "ရင်သားကင်ဆာ: အပင်အနာပျောက်စေနိုင်သောတစ်ဦးကတိပေးကော့တေး 6
ရင်သားကင်ဆာ: အပင်အနာပျောက်စေနိုင်သောအလားအလာကော့တေး 6
အပင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ, အသီးအနှံ, နံ့သာမျိုးနှင့်အမြစ်များရင်သားကင်ဆာဓါတုဆေးသွင်းကုသမှုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိဘဲအနာဂတ်ပါဝင်ပစ္စည်းများပေးနိုင်ဘူး။
မကြာခင်မှာပဲသဘာဝဓာတုကုထုံး? အဆိုပါထုတ်ဝေလေ့လာမှုတစ်ခု ကင်ဆာ၏ဂျာနယ် အပင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ, အသီးအနှံ, နံ့သာမျိုးနှင့်အမြစ်များ - - နမူနာများတွင်ရင်သားကင်ဆာဆဲလ် 100% သတ်ပစ်နိုင်ခဲ့တယ်နှင့်ပုံမှန်ဆဲလ်အဆိပ်အတောက်မပါဘဲ, ထိုခြောက်လစူပါဟင်းသီးဟင်းရွက်တ္ထုများတစ်ခုကော့တေးဖော်ပြသည်။ ဤရလဒ်သည်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိဘဲသစ်ကိုကုသမှုအတွက်အလားအလာနည်းလမ်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ရင်သားကင်ဆာသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အမျိုးသမီးသေဆုံးမှု၏တစ်ဦးဦးဆောင်အကြောင်းမရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ နှစ်စဉ် 1,3 သန်းအမျိုးသမီးများကိုသူတို့ကများရှာဖွေတွေ့ရှိနှင့် 450 000 သေဖို့ထက်ပိုမို။ ရင်သားကင်ဆာကင်ဆာ၏နံပါတ် inexorably မြင့်တက်ဆက်လက်လြှငျ, ကတရွေ့ရွေ့ကျနော်တို့ပိုကောင်းအနည်းဆုံးအနောက်တိုင်းနိုင်ငံများရှိဆက်ဆံဖို့စီမံခန့်ခွဲ။
ထို့ကြောင့် ပြင်သစ်အစောပိုင်းထောက်လှမ်းရန်နှင့်အထူးသဖြင့် ပို. ပို. အကျိတ်မှအဆင်ပြေအောင်သစ်ကိုကုသနိုင်ဖို့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, အမျိုးသမီးများ၏ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 80% အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေ။ သုတေသီကဒီအမေရိကန်လေ့လာမှုအတွက်အထဲကထောက်ပြအဖြစ်သို့သော်, ဓါတုဆေးသွင်းကုသမှုသို့မဟုတ်ဓါတ်ရောင်ခြည်များအတွက်လက်ရှိကုသမကြာခဏဘေးထွက်ဆိုးကျိုးစိန်ခေါ်နှင့်တခါတရံတွင်ခုခံနှင့်တွေ့ဆုံရန် generate ။ "အမှန်စင်စစ်ဤလေ့လာမှုကိုဦးဆောင်သူဒေါက်တာ Raj ကလည်း, အဓိကရင်သားကင်ဆာပြန်ဖြစ်၏အကြောင်းတရားများနှင့်သူ၏သေခြင်း၏တဦးတည်းကုထုံး evades ကြောင့်ကင်ဆာပင်စည်ဆဲလ်တစ်အုပ်စုငယ်ဖြစ်ပါတယ်။ မျိုးစုံမူးယစ်ဆေးဝါးများမှမကြာခဏခံနိုင်ရည်ဒါတွေကဆဲလ်အသစ်မြင်းသရိုက်အနာကို generate လုပ်နိုင်စွမ်းရှိသည်, ဒါကြောင့်အသစ်နှင့်ပိုမိုထိရောက်ချဉ်းကပ်မှုနှင့်ဘေးကင်းကုသမှုနှင့်ရင်သားကင်ဆာကာကွယ်တားဆီးရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ "
အဆိုပါသုတေသနအဖွဲ့ကထိုကဲ့သို့သောပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း, စပျစ်သီး, ပန်းသီး, tofu သို့မဟုတ်နနွင်းအမြစ်အဖြစ်အစားအစာများတှငျတှေ့အချို့လူသိများစက်ရုံတ္ထုများ၏ဂုဏ်သတ္တိများကိုစမ်းသပ်ချင်တယ်။ လတ်တလောလေ့လာမှုများအစဉ်အဆက်ကင်ဆာဆဲလ်၏ပြီးပြည့်စုံသောပပျောက်ရေးဆန္ဒပြမရှိဘဲဓါတ်တိုးအရည်အသွေးတွေ, Anti-inflammatory သို့မဟုတ် Anti-proliferative တချို့စူပါအစားအစာများကိုမီးမောင်းထိုးပြကြပြီ။ တကျိပ် phytochemicals နှင့်အတူ၎င်းတို့၏အတွေ့အကြုံများကိုစတင်ပြီးနောက်, ဒေါက်တာ Raj နဲ့သူ့အဖွဲ့, နနွင်းကနေခြောက်လစူပါ-တ္ထုများ curcumin တစ် Synergy ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပဲပုပ် isoflavones (genistein), indole-carbinol3cruciferous ( ဂေါ်ဖီထုပ်, ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း ... ), ပီရူလိုင်းနား၏ကို C-phycocyanin, Resveratrol စပျစ်သီးနှင့်အ quercetin တစ် flavonoid အသီးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်လက်ဖက်ရည်။
သူတို့အနေနဲ့စူပါကော့တေးအတွက်အတူတကွအုပ်စုဖွဲ့သောအခါအခြားစမ်းသပ်မှု၎င်းတို့၏သက်ရောက်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အနေဖြင့်ခြောက်လမော်လီကျူးထိုကြောင့်, ကင်ဆာဆဲလ်များအပေါ်တဦးတည်းအားဖြင့်တဦးတည်းကိုစမ်းသပ်ခဲ့သည်။ တစ်ဦးချင်းစီသည်တ္ထုများအလွန်ထိရောက်သောမဟုတ်ပေါင်းစပ်သူတို့ 80e တစ်နေ့ပြီးပိုပြီး 6% ထက်ကင်ဆာဆဲလ်များကြီးထွားမှုကိုရပ်တန့်ခြင်းနှင့်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုကန့်သတ်နိုင်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့တစ်ဦးကလာပ်စည်းအသေခံခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကျန်းမာတဲ့ဆဲလ်တွေဖို့ထိခိုက်မှုမရှိဘဲကင်ဆာဆဲလ်များ၏ 100% ၏နိဂုံးကိုမှနောက်ဆုံးတွင်ဦးဆောင်တပ်ဆင်ပေးခဲ့သည်။ သိပ္ပံပညာရှင်အဖွဲ့လည်း metastasis လျှော့ချနိုင်ကြောင်းမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
ဒီတော့ဒီမှာ 75 အပြင်ကင်ဆာ 2030% ရှိနိုင်တယ်လို့ - အထူးသဖြင့်ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံတွေမှာ - ဤပထမဦးဆုံးရလာဒ်များတောက်ပတဲ့မျှော်လင့်ချက်နေသောခေါင်းစဉ်: သူတို့ကရန်ပွဲနှင့်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအတွက်အတူတကွပေါင်းစပ်အလားအလာဓာတ်အားပေးစက်ရုံကိုပြသ ရင်သားကင်ဆာ။ အတော်များများကလေ့လာမှုများသို့သော်နေဆဲမှာသဘာဝနှင့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိဘဲ, အသစ်တစ်ခုမျိုးဓါတုဆေးသွင်းကုသမှုရန်, ဖြစ်ကောင်းတနေ့ဦးဆောင်လမ်းပြရန်လိုအပ်သည်။
မိန်းကလေးများ cellulite နှင့်အတူ mini ကိုဘောင်းဘီတိုအတွင်း: ဤပြဿနာနှင့်ရင်ဆိုင်နေရကြောင်း,
အိန္ဒိယ: တရားသူကြီးတောင်မှအနားယူပြီးနောက် Babri ဖြိုဖျက်ကိစ္စတွင်ကြားနာဆက်လက်ခွင့်ပြုနေတဲ့လမ်းကိုရှာပါ: UP အစိုးရမှ SC | အိန္ဒိယသတင်း
ဂုဏ်ပြုကို Legion of Honour: macron သူသည်မိမိလောင်းကြေးအနိုင်ရ? - ဗွီဒီယို
ဆဲစင်မြင့်ပေါ် 3ich Tounsi ဦးဆောင်ဥပဒေပြုရေးနှင့်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲ Nabil Karoui
iPhone ကို7အမြင်
Karidja Coulibaly များ: Beauty, ချို, ဉာဏ်, Ahmed က Sylla ၏မကြာသေးမီကဇနီးရွေ့လျားမှုအတွက်ပတ္တူထားအဘယ်ကြောင့်ဤနေရာတွင်င် - Abidjanshow.com